Hydro Flask ရေဘူး၊ သံမဏိ Shaker ပုလင်း၊ ဘူးပုလင်း - Huijiong
Hebei Huijiong ကုန်သွယ်ရေး။ ,
ထိပ်တန်း 1 drinkware
လေဟာနယ်ကော်ဖီခွက်များ၊ သံမဏိရေပုလင်းများ၊ လူမီနီယမ်ရေပုလင်းများ၊ ၀ ါးရေပုလင်းများ၊ ပရိုတင်း Shaker ဘူး၊ ကြွေကော်ဖီခွက်၊ သံမဏိနေ့လည်စာသေတ္တာ၊ ဖန်ခွက်များနှင့်အစားအစာအိုးများ ...
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ရောင်စုံကြွေထည်ပစ္စည်းများ: ကြွေထည်ပစ္စည်း - ၃၆၅ မီလီမီတာအရွယ်အစား - ၁၂.၅ * ၉.၅ စင်တီမီတာအရောင် - အဖြူရောင် - အနက်ရောင် - မွေ့ရာ၊ အနီရောင် - စသည်တို့ဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်း - USD1.6 - USD2.5 / PC အင်္ဂါရပ်များ - မာကုခွက်ကိုရေအဖြစ်အသုံးပြုသည် ခွက်, နို့, ကော်ဖီနှင့်အခြားကွေးလက်ကိုင်။ အသုံးပြုရန်ပိုမိုအဆင်ပြေသည်။ LID ခွက်နှစ်မျိုးကိုမူမူလကြွေထည်မြေထည် LID များနှင့်အခမဲ့ပေးနိုင်ပါသည်။ အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ - အောက်လျှောကျသောဒီဇိုင်းလက်ကိုင်ဒီဇိုင်း၏အောက်ဆုံးသည်ကောင်းသော retro retro style ဖြစ်သည်။ ကော်ဖီ ...
သံမဏိပဲအပူ thermos ခွက်ကို
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: သံမဏိပဲအပူထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးခွက်ပစ္စည်း - သံမဏိ ၃၀၄ သံမဏိစွမ်းရည် - 400ml အရွယ်အစား - အချင်း ၆.၅ စင်တီမီတာနှင့်အမြင့် ၂၀ စင်တီမီတာစျေးနှုန်း - အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇.၈ ၂၇၁၈၁ အနည်းဆုံးအမှာစာအရေအတွက် - ၂ လုပ်ငန်းစဉ် - စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောတံဆိပ်အရောင် - အဖြူ၊ အနက်ရောင်၊ ပန်းရောင်စသည်တို့ ထူးခြားချက်များ - LED အသိဉာဏ်ပြမှု၊ အသိဉာဏ်ရှိသောအပူချိန်တိုင်းတာမှု၊ ပွင့်လင်းသောအဖုံး၊ ရေရှည်ကာကွယ်မှု၊ ခလုတ်တစ်ချက်ဖွင့်ခြင်း၊ အားကစားပုလင်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်လက္ခဏာများ ၁ ။ ယိုစိမ့်မှုမရှိခြင်းမရှိ၊ Don, ...
သံမဏိလုပ်နိုင်တဲ့ thermos ခွက်ကို
Num ကုန်ပစ္စည်းစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအရွယ်အစား ၁ သံမဏိဘူးများ thermos ခွက် ၃၀၀ မီလီမီတာ ၅၀၀ မီလီမီတာ ၃၀၀ မီလီမီတာအမြင့် ၁၃.၅ အချင်း ၅.၅ မီလီမီတာအမြင့် ၁၈.၂ အချင်း ၆.၃ ၂ သံမဏိဘီယာခွက် (လက်ဆောင်သေတ္တာအစုံ) ၅၀၀ မီလီမီတာ ၃၅၀၀ မီလီမီတာ ၂ ၃ သံမဏိကျည်ဆံကာခွက် 500ml24 သံမဏိကာတွန်းပဲအပူခံခွက်ဖလား ၃၀၀ မီလီမီတာ ၄၀၀ မီလီမီတာ ၂ နှစ်ထပ်ကာရံထားသောသံမဏိသံမဏိအပူခံပုလင်းဘူးရေသောက်ရေစိုခံကျောင်းခရီးသွားကလေးများကျောင်းသားများအရွယ်ရောက်သူများရုံးရုံးအပူနှင့်အအေးခံအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: အမျိုးအစား: Thermos ပုလင်း ...
Hebei Huijiong trading co ။ , Ltd. သည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှီယာဇွမ်တွင်တည်ရှိပြီးသံမဏိဖန်ခွက်များ၊ ဖုန်စုပ်ကော်ဖီခွက်များ၊ သံမဏိရေပုလင်းများ၊ အလူမီနီယမ်ရေပုလင်းများ၊ ၀ ါးရေပုလင်းများ၊ မိသားစုများ၊ ဟိုတယ်များ၊ ပြင်ပနေရာများ၊ ရုံးများ၊ အားကစားများစသည်တို့အတွက်သင့်လျော်သော၊ ဖန်ခွက်နှင့်စားအိုးများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အကျိုးရှိစွာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအမြဲပေးသည်။
သတင်း | ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄-၂၀၂၁
★မော်ဒယ်: HJ020 ★ပစ္စည်း - အတွင်းနှင့်အပြင်တွင်သံမဏိ ၃၀၄ ★ကိုယ်ထည်အရောင် - ဆေးမှုတ်ဆေးသည်ပက်စလေမှုတ်ဆေးဖြစ်သည်။ သံမဏိမူလအရောင်★ (ကိုယ်ခန္ဓာအရောင်နှင့် LOGO ကိုယ်ထည်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည် ...
သတင်း | ဇန်နဝါရီ -20-2021
ကော်ဖီခွက်ကိုအနုတ်လက္ခဏာအိုင်းယွန်းအမှုန့်၊ Tourmaline၊ အရည်အသွေးမြင့်သောရွှံ့စေးနှင့်အခြားအခြေခံပစ္စည်းများရောနှောခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ မြင့်မားသောကော်ဖီခွက်မှထုတ်လွှတ်လိုက်သောအနုတ်လက္ခဏာအိုင်းယွန်းများ၏မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုသည် electr ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အားကစားပုလင်း၏ Functional ဝိသေသလက္ခဏာများ
အားကစားရေပုလင်းများသည်လူကြိုက်များပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအားကစားထုတ်ကုန်အသစ်များဖြစ်လာသည်။ ပြည်တွင်းအပြင်ပန်းအားကစားများတိုးတက်မှု၊ တိုးတက်မှုနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူအားကစားရေအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏ ...
၁.၃၀၄ သံမဏိသည်ခိုင်ခံ့သောသံချေးတက်ခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းမြင့်ခြင်း。 2. ၃၀၄ သံမဏိများကိုရှုပ်ထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ခိုင်ခံ့သောချေးမခံသောနေရာများတွင်အသုံးပြုသည်。 3. 304 သည်အဓိကအားဖြင့် ...
Hebei Huijioing Trading Co. , Ltd.
, ©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2021: All Rights Reserved ။